Sad दुःखको कारण हामी किन हामीलाई माया गर्छौं - सम्बन्ध
Sad दुःखको कारण हामी किन हामीलाई माया गर्छौं
हामी आफूले माया गर्नेलाई किन चोट पुर्‍याउँछौं?
यो विश्वास गर्न गाह्रो छ कि यो त्यस्तो सामान्य चीज हो जब हामी केवल प्रेम गर्न र माया गर्न चाहन्छौं।
समस्या यो हो कि जीवन सँधै सरल वा सफा हुँदैन।
व्यक्तिहरू प्राय: त्रुटिपूर्ण प्राणीहरू हुन् जसले आवेगजनक भावनाबाट प्रतिक्रिया गर्दछन जब यसलाई रोक्नको लागि उत्तम हुन्छ।
हामीसँग यस मामिलामा सँधै विकल्प हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाँही परिस्थिति यति ठूलो हुन्छ कि हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं तर भावनात्मक स्थानबाट कार्य गर्न सक्दछौं।
हामी चित्त दुख्न, डराउन वा क्रोधित हुन सक्दछौं र ती प्रेमहरूलाई आफुलाई माया गर्नेहरूलाई हटाउन सक्छौं किनकि ती हुन् जसलाई हामी नजिक छौं। तिनीहरू ती हुन् जसकालागि हामीले हाम्रो गार्डलाई तल झार्छौं, ताकि तिनीहरूले ती छापिएका भावनाहरू र प्रतिक्रियाहरूको सिंह हिस्सा पाउनेछन्।
त्यो स्वस्थ वा अस्वस्थ हुन सक्छ। हामी के गर्न चाहन्छौं भनेको हाम्रो प्रियजनहरूसँग स्वस्थ द्वन्द्व र भावनाहरू राख्नु हो। त्यसो गर्न हामीले केही कारणहरू हेर्नुपर्दछ कि किन हामीले हाम्रा प्रियजनहरूलाई हानी गर्छौं र हामी यसको बारेमा के गर्न सक्छौं।
१. तपाईं द्वन्द्वलाई प्रेमको साथ मिलाउन सक्नुहुन्छ।
जो मानिस विवादास्पद वा दुरुपयोगले भरिएको घरमा हुर्कन्छन् उनीहरूले प्रेमको अभिव्यक्तिको रूपमा द्वन्द्व सम्बद्ध गर्न सक्छन्।
केही व्यक्तिहरुका लागि, आफ्नो प्रियजनसँग बहस वा झगडा गर्नु भनेको उनीहरुसंगको झगडामा संलग्न हुन पर्याप्त ध्यान दिनको लागि उनीप्रति भावुक हुन्छन् भन्ने कुराको प्रदर्शन हो।
कुनै पनि सम्बन्धमा विवादास्पद स्वस्थ छ किनकि मानिस अस्थिर प्राणीहरू हुन्। तिनीहरू सम्बन्धित बक्समा राम्ररी बस्दैनन् जुन अरूले उनीहरूलाई राख्न प्रयास गर्न सक्छन्।
विवादास्पद एक तरीका हो जहाँ व्यक्तिहरू प्रदर्शन गर्न सक्छन् जहाँ उनीहरूका सीमाहरू छन् र कसरी उनीहरू लागु हुन्छन्। यसको मतलब यो छ कि कसैको रीस र निराशा व्यक्त गरिएको छ, दमन र बेवास्ता गर्नुको सट्टा।
एकको क्रोध र निराशाको दमन हुन्छ आक्रोश , जो अन्ततः सम्बन्ध बिगार्छ।
एक व्यक्ति जो संघर्ष संग प्रेम संग सजिलैसँग झगडा शुरू हुन सक्छ यदि चीजहरु 'धेरै राम्रो' एक विस्तारित समय को लागी, केवल उर्जा र जोश हेर्न को लागी।
हेल ​​बेरी र गेब्रियल औब्रे
यस प्रकारको समस्यालाई पेशेवर उपचारको साथ सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्दछ। दुर्व्यवहारबाट बचेकाहरूमा उनीहरूको अनुभवको कारण एक मायालु सम्बन्धको गठनको बारेमा विकृत दृष्टिकोण हुन सक्छ।
यी पुरानो बानीहरू हटाउने र तिनीहरूलाई नयाँको साथ प्रतिस्थापित गर्नु भनेको एकको भावनालाई ध्यान दिएर हेर्नु, हामी किन गर्छौं भनी बुझ्ने, र त्यसपछि विभिन्न कार्यहरू छनौट गर्ने लामो प्रक्रिया हो।
२. तपाई आफैंको सम्बन्धहरुलाई सब्बोस्टेज गर्न सक्नुहुन्छ।
किन व्यक्तिले उनीहरूको आफ्नै सम्बन्धहरूलाई तोड्छ? सबैजना माया र खुशी महसुस गर्न चाहँदैनन्?
ठिक छ, हो, तर यो प्रायः समस्या नै हुँदैन जब यो आत्म-तोडफोडको आउँछ। सेल्फ-सबोटेजिंग ब्यबहार सामान्यतया उनीहरूसँगको एक सम्बन्धको परिणाम हो।
यदि तपाईं आफूलाई माया वा खुशीको लागि योग्य हुनुहुन्छ जस्तो महसुस गर्नुहुन्न भने, तपाईंलाई स्वीकार्न गाह्रो पर्न सक्छ कि कसैले तपाईंको बारेमा सकारात्मक महसुस गर्न सक्छ तपाईं उनीहरूको बारेमा जस्तो गरी गर्नुहुन्छ।
त्यसोभए, तपाईं आफैंले आफ्नो सीमानाको नजिक धक्का दिन सीमाको परिक्षण, पोकि and र प्रोडिंग फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
हुनसक्छ तपाईं आश्वासन खोज्दै हुनुहुन्छ? आफैंमा प्रमाणित गर्न कि तिनीहरू तपाईंमा बौलाहा हुन सक्छन्, तर अझै पनी आउनुहोस् र तपाईंलाई माया गर्नुहुन्छ?
वा हुनसक्छ तपाइँ साच्चै महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाइँ प्रेम गर्न योग्य हुनुहुन्न? त्यसोभए तपाईले उनीहरूसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध भ break्ग गर्न को लागी तपाई जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाई आफैंमा अपरिचित हुनुहुन्छ कि तपाईको आफ्नै दिमागमा पुन: पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ।
यी कुनै पनि व्यवहार स्वस्थ छैनन्। पहिलो कुशलतापूर्ण छ र भावनात्मक दुरुपयोगको क्षेत्रमा पर्दछ। दोस्रो अनावश्यक हो र यसलाई मर्मत गर्ने तपाईंको क्षमता विगतको सम्बन्ध तोड्न सक्दछ।
सबै प्रकारको आत्म-सब्बेटिंग व्यवहार तपाईंको साथको सम्बन्धमा आउँदछ। के तपाई मूल्यवान हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? मायाको लायक छ? वा तपाईं आत्मसम्मान र आत्म-मूल्य संग संघर्ष गर्दै?
तपाईले यस मुद्दालाई ठीक गर्ने तरीका भनेको तपाईको मुद्दालाई तपाईको आत्मसम्मान र आत्म-मूल्यमा फिक्स गरेर हो, जसमा सम्भवतः एउटा चिकित्सकको आवश्यकता पर्दछ। तपाईंले नयाँ, स्वस्थ व्यक्तिहरू सहित तपाईंको पुरानो, अस्वस्थ बानीहरू बदल्न पनि आवश्यक छ।
के तपाइँ जीवन मा साथीहरु को आवश्यकता छ?
You. तपाईं आफ्ना प्रियजनहरूसँग धेरै सहज हुन सक्नुहुन्छ।
तपाईको प्रियजनहरु संग अत्यन्त सहज हुनु भनेको के हो? ठिक छ, जब व्यक्ति पहिलो पटक नयाँ व्यक्तिलाई भेट्छन्, तिनीहरूले आफैंको सामान्य संस्करण प्रस्तुत गर्दछन्।
उनीहरूले सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत गर्छन् जुन उनीहरूले सोच्दछन् कि उनीहरूलाई मनपर्दो वा मिलनसार बनाउँछन् र नकारात्मक पक्षहरूलाई खण्डन गर्दछ जुन समाजीकरण रोक्न सक्छ।
सबैजनासँग सीमा र सीमानाहरू हुन्छन्, तिनीहरूले लगाउने मास्क तिनीहरू आफूले नचिनेका वा नजान्ने मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा उनीहरूले लगाउँछन्। व्यक्तिहरू प्राय: आफैंको बढी चुनौतीपूर्ण पक्षहरू सजिलै संसारले देखिन चाहँदैन। यो तर्क को बेवास्ता वा एक स्थिति को बारे मा एकको साँचो भावनाहरु थिचोल्ने रूप लिन सक्छ।
तर जब तपाईं कसैको नजीक जानुहुन्छ, ती सीमाहरूको धेरै टाढा हुन्छन्। जब तपाइँ एक व्यक्तिसँग सहज हुनुहुनेछ, तपाइँले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सजिलै पाउनुहुनेछ वा आफैले ती नकारात्मक पक्षहरू देख्न पाउनुहुनेछ।
समस्या यो हो कि तपाईं कसैसँग नजिक हुन सक्नुहुन्छ जसको साथ तपाईंसँग मौलिक रूपमा फरक फरक विचारहरू छन्। तर यदि तपाईं ती विचारहरू र भावनाहरूलाई स्वस्थ तरीकाले व्यवहार गर्न सक्नुहुन्न भने, तिनीहरू अनावश्यक तर्क र द्वन्द्वको लागि ईन्धनमा परिणत हुन सक्दछन्।
जब तपाईं घनिष्ठता विकास र आफ्नो सीमा आराम, तपाईं आफैलाई अधिक स्वतन्त्र र विचार बिना बोल्दा पाउन सक्नुहुन्छ। तसर्थ, तपाईं आफ्नो प्रियजनलाई चोट पुर्‍याउन वा चोट पुर्‍याउन सक्नुहुनेछ।
समाधान भनेको तपाईंको भिन्नताहरू र उनीहरूको बारेमा कुरा गर्ने तरिकाको बारेमा राम्रो ज्ञान छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नका लागि हो।
यदि त्यहाँ एक तातो बटन मुद्दामा तपाईं असहमत हुनुहुन्छ भने, तपाईंले क्रोधको पासोमा नपर्न काम गर्नुपर्दछ र तपाईंलाई आफूले माया गरेको मान्छेलाई जस्तो लाग्ने शब्दहरू मात्र फालिदिनुहुन्छ, किनकि ती राम्रो हुन सक्दैनन्। तपाईको माइन्डफिलनेसलाई विकास गर्नु यो सीपलाई सान पार्ने उत्तम तरिका हो।
You. तपाईं नियन्त्रण वा बदला लिन खोज्दै हुनुहुन्छ।
पारस्परिक गतिशीलता जटिल हुन सक्छ, विशेष गरी जब अघिल्लो अनुभव वा मानसिक रोग योगदान गरिरहेका छन्।
कहिलेकाँही एक व्यक्ति सम्बन्ध मा नियन्त्रण प्राप्त गर्न को लागी एक तरीका को रूप मा आफ्नो प्रियजनहरु संग झगडा शुरू गर्न वा अघिल्लो चोट को लागी बदला लिन सक्छ।
विचार यो छ कि 'यदि मैले पहिले तपाईंलाई चोट पुर्‍यायो भने तपाईं मलाई चोट गर्न सक्नुहुन्न। '
यस प्रकारको व्यवहारलाई ठीक हुन आवश्यक छ, अराजक भावनाहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्न, आत्म-मूल्यको अभावमा, वा भावना जस्तो गरी तपाईं परिस्थितिको नियन्त्रणबाट बाहिर हुनुहुन्छ।
वा, यो हुन सक्छ कि अर्को व्यक्तिले तपाईलाई चोट पुर्यायो, त्यसैले तपाईलाई ती चोट पुर्याउनु पर्ने महसुस हुन्छ।
यस दृष्टिकोणको साथ समस्या यो छ कि यो चाँडै अपमानजनक व्यवहारमा ओर्लन्छ जुन ठीक छैन।
तपाईंको प्रियजनले तपाईंलाई चोट पुर्याउँछ, त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई चोट पुर्याउनुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरूले तपाईंलाई फिर्ता चोट पुर्याए, त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई पीठो पार्नुभयो, र लगातार र क्रोध र पीडाको अपरिचित गडबडीमा स्थिति सर्प नगरेसम्म।
यस प्रकारको समस्याको समाधान सीमामा र उत्तम छनौटहरूमा तल झर्छ।
कहिलेकाँही मानिसहरू असंवेदनशील वा मूर्ख काम गर्छन् जसले मानिसहरूलाई उनीहरूको नजिकको चोट पुर्याउँदछ। त्यो अपरिहार्य छ।
मुख्य कुरा के हो किन उनीहरूले यो गरे। के तिनीहरू जानाजानी द्वेषपूर्ण र दुर्व्यवहार भइरहेको थियो? वा उनीहरूले केहि मूर्ख र छोटो प्रदर्शन गरेका थिए? के तिनीहरू हाल आफ्नै समस्याहरूले अभिभूत भइरहेको छ? के उनीहरूलाई तपाईको सहयोग चाहिन्छ? के तिनीहरूलाई पेशेवर सहयोग चाहिन्छ?
कसरी थाहा पाउने जब कोहि तपाइँ संग फ्लर्ट गर्दै हुनुहुन्छ
सम्बन्ध अन्य व्यक्तिको बिरूद्ध तपाइँको प्रतिस्पर्धा होईन। तराजुलाई सन्तुलनमा राख्न वा क्षति भएमा बदला लिने आवश्यकता हुनुपर्दैन। यदि तपाईलाई यो आवश्यकता महसुस भएको छ भने तपाईले आफैलाई सोध्नु पर्छ, 'किन?'
तपाईं किन तराजु सन्तुलित गर्न आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ? के यो आवश्यक छ? यो दयालु छ? के तपाईंलाई एक व्यक्तिसँग बलियो सीमाहरू चाहिएको छ जो कठिन समय पाइरहेको छ वा आफ्नै समस्याहरूको सामना गर्दैछ?
You. तपाईलाई तपाईको प्रियजनबाट अवास्तविक आशा हुन सक्छ।
यो सबै राख्ने को पासो मा पस्न को लागी सबै सजीलो छ अवास्तविक आशा हामीले माया र मूल्य मान्छे मा।
जे भए पनि हामीले सोच्नु पर्दछ कि उनीहरू माया र मूल्यलाई केहि विशेष बनाउन सक्छन् हामीले गर्ने तरिकाको लागि। त्यसोभए के यसले कुनै अर्थ राख्दैन कि हामी उनीहरूले उच्च स्तरमा रहन अपेक्षा गर्छौं वा हामी उनीहरूको उत्तम कुरा सोच्दछौं?
दुर्भाग्यवस, मानिसहरूले त्यस प्रकारले कार्य गर्दैनन्। व्यक्तिहरू गडबड, असुरक्षित, सँधै विश्वस्त प्राणीहरू हुँदैनन् जसले खराब निर्णयहरू र गल्तीहरू गर्छन्। अरुहरु भन्दा केहि मानिसहरु।
तपाईंले आफ्नो प्रियजनलाई रीस उठाउनु वा चोट पुर्‍याउन सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले उनीहरूलाई उनीहरूले सोचे जस्तो लाग्दैन भने।
मिडिया नियमित रूपमा हामीलाई सही सम्बन्ध र कहानी पुस्तक रोमान्सको बारेमा कथाहरू फीड गर्दछ जुन असमर्थनहरूको बाबजुद सफल हुन्छ।
र मार्केटिंगले हामीलाई भन्छ कि हाम्रो परिपूर्ण साथी यहाँ छ, हाम्रो प्रतिक्षा गर्दै! एउटा सुरम्य, साहसी जीवनको लागि कुर्दै छन् जहाँ तपाईंको समस्याहरू तपाईंको रियरभ्यू मिररमा हुनेछ, र त्यहाँ राम्रा समयहरू मात्र छन्! तपाईं खुशी हुनुहुनेछ यदि तपाईंले यो उत्तम व्यक्ति पाउनुभयो भने, तपाईंको आधा, तपाईंको उत्तम आधा किनभने प्रेमले तपाईंलाई पूर्ण व्यक्ति बनाउँदछ!
ल। यदि तपाईंको 'राम्रो आधा' वास्तवमै राम्रो छैन भने के हुन्छ? के हुन्छ यदि तपाइँको सही व्यक्ति यति सिद्ध छैन? तपाईं आधा व्यक्ति वा अपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्न, तपाईं पूर्ण, त्रुटिपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ कुनै अन्य सम्पूर्ण, त्रुटिपूर्ण व्यक्ति जस्तो तपाईंले प्रेम गर्न वा हेरचाह गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वस्थ, खुशी सम्बन्धहरू व्यावहारिक अपेक्षाहरू मा आधारित छन्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको द्वन्द्वहरू तपाईंको परिवारका सदस्यहरू, साथीहरू, वा पार्टनर के हुनुपर्दछ भन्नेको अनुचित अपेक्षाहरूमा आधारित छैन।
You. तपाईंले आफूले माया गरेको मानिसलाई चित्त दुखाउन सक्नुहुन्छ किनकि तिनीहरू प्राय: जसो प्रायः आसपास हुन्छन्।
तपाईंले वरपरका धेरै समय बिताउनुभएका मानिसहरूलाई तपाईंले दुःख दिनुहुनेछ किनभने कसरी तपाईं सक्नुहुन्न?
यदि तपाईंले आफ्नो पार्टनरसँग बहुमत खर्च गर्नुभयो भने, तिनीहरूले दुबै सकारात्मक र नकारात्मक भावनाहरू अनुभव गर्न सक्नेछन्।
यो त्यस्तो चीज होइन जुन तपाईं बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। संघर्ष अनिवार्य रूपमा हुन्छ। तपाईको काममा डरलाग्दो दिन हुन सक्छ, राम्रो मानसिक स्थानमा नहुन, र तपाईको प्रियजनलाई अनुचित रूपमा तस्विर लिनुहोस् किनकि तपाईले आफ्नो टाउको सीधै प्राप्त गर्नुभएको छैन।
यसैले द्वन्द्व समाधान र भावनात्मक बुद्धिमता यति महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले आफ्नो भावनात्मक अवस्था अवलोकन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ र आफैलाई यस्तो अवस्थामा पुग्नुहोस् जहाँ तपाईं अन्यायपूर्वक आफ्नो प्रियजनलाई प्रहार गर्नुहुन्न।
अर्कोतर्फ, जब यो हुन्छ, तपाईं चीजहरू सुचारु गर्नको लागि सक्षम हुनुपर्दछ र तपाईंले नजिकको मान्छेहरूसँग शान्तिमय सम्बन्ध राख्नुपर्दछ।
तपाईं यो सबै समयमा प्राप्त गर्नुहुने छैन, र यो ठीक छ। तपाईं सबै जस्ता त्रुटिपूर्ण मानव हुनुहुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईंले आफ्ना सम्बन्धहरूमा द्वन्द्वलाई सहज पार्ने तरिकाहरू खोज्ने प्रयास गरिरहनुभयो ताकि उनीहरू खुशी र स्वस्थ हुन सक्छन्।
अझै पक्का निश्चित हुनुहुन्न कि तपाईलाई माया गर्ने मानिसहरुको उपचारको बारेमा के गर्ने? रिलेशनशिप हीरोको सम्बन्ध विशेषज्ञसँग अनलाइन कुराकानी गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई चीजहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। केवल
के एक सम्बन्धमा बहस स्वस्थ छ? (+ कति पटक दम्पतीहरु झगडा गर्छन्?)
सम्बन्धमा निष्पक्ष रूपमा कसरी लड्न: पछिको जोडीहरूका लागि १० नियमहरू
लडाई पछि कसरी बनाउने र तपाईंको सम्बन्धमा बहस गर्न रोक्नुहोस्
इमान्दारीपूर्वक र उचित तरिकाले माफी माग्ने तरिका र यसको मतलब
Pain दर्दनाक कारणहरू किन यति धेरै चोट पुग्छ प्रेम
१ No कुनै बुलश * t तरीका छैन तपाईंको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने
विषाक्त सम्बन्ध ढाँचा दोहोर्याउन कसरी रोक्ने
यदि तपाइँ कोहि साथी छैन भने के हुन्छ
क्रिस बेनोइट मृत्यु को कारण
snl ब्यारी गिब टक शो
कसरी एक narcissist फिर्ता तान्छ
जब एक केटा त्यो तपाइँ मा छैन